Iran: Fizarana Ovy Maimaim-poana Niteraka Resabe Momba Ny Fifidianana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Oktobra 2017 3:55 GMT
Nizara ovy maimaim-poana tany amin'ireo tanàna samihafa ireo manampahefana iraniana tato anatin'ny herinandro vitsivitsy. Mpanao politika Iraniana maromaro no nanakiana ity fizarana ovy maimaim-potoana nataon'ny governemantan'i Mahmoud Ahmadinejad ity ho toy ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana filoham-pirenena ary miantso izany ho fandaniam-bolam-bahoaka fotsiny. Nilaza ireo manampahefana Iraniana fa misy mihoatra ny famatsiana ovy ao Iran ka nividy sy nizara ireo ambiny tafahoatra ireo fotsiny ny governemanta. Namoaka sary maromaro misy ny fizarana ireo ovy tao amin'ny Oniversite ao Isfahan ny tranonkala Iraniana Tabnak . Bilaogera maro koa no naneho ny hevitr'izy ireo tamin'ity ‘Fanafintohinan'ny Ovy’ ity.
Nik Ahang, Iraniana mpanao sariitatra malaza sady bilaogera, namoaka sariitatra (etsy ambony) izay misy ovy miteny amin'i Ahmadinejad hoe: manohana anao izahay’.
Mmoeeini, izay manohana ny praiminisitra teo aloha Mir Hossein Mousavai amin'ny fifidianana filoham-pirenena indray dia mihevitra fa ny fizarana ovy maimaim-poana dia ezak'i Ahmadinejad mba hahazoana vato. Nanoratra ity bilaogera ity fa nampanantena ny filoha Iraniana efa-taona lasa izay fa hizara ny vola miditra amin'ny solitany ho an'ny vahoaka ary satria efa akaiky ny fifidianana filoham-pirenena, nizara ovy maimaim-poana tsy an-kiteniteny ireo mpiasan'ny Minisiteran'ny fambolena.
Nemat Sibil nilaza hoe:
Tao anatin'ny andro vitsy, kamiao am-polony no nizara ovy tao amin'ny faritra manodidina an'i Teheran. Toa tsy misy fetrany ny fahazoana ireo ovy ireo ary miaraka amin'ny harona lehibe mihitsy ireo fianakaviana ary misaotra ny mpizara. Toa misy ny fifandraisana eo amin'ireo ovy maimaim-poana ireo sy ireo nozaraina tany Shiraz.
Abbas Abdi, mpanao fanadihadiana ara-politika indray mihevitra fa ny fizaràna ovy maimaim-poana dia hitarika ny fandaniam-poana azy ireo fotsiny, satria maka araka izay tiany ny olona kanefa tsy afaka mitahiry azy ireo akory. Hoy izy nanontany:
Nahoana ny governemanta no tsy nizara tongolo be maimaim-poana ary avy aiza ny loharanom-bola laniana amin'ity hetsika ity?